Izizathu ukuthenga emasongweni zingase zihluke, kodwa hhayi ngaphambi kokuba abaningi kuphakama umbuzo kanjani ukukala usayizi iringi. Kunezindlela eziningana, okuyinto zichaziwe ngezansi.
Hhayi ukuba ahlukumeze ngokwakho nge umbuzo kanjani ukukala usayizi iringi, kwanele ukuya ubucwebe esitolo esiseduze bese ubacela ukunquma usayizi wesithombe sakho. Uma ufuna ukufunda indlela yokukwenza wena, ukhumbula elinye umthetho, othi ububanzi we ngomunwe iyona ring usayizi. Ngakho-ke, ukuthenga ubucwebe-intanethi, lapho ungeke zama umkhiqizo, nje ambalwa indandatho yakho ekhona futhi ukukala ubukhulu bayo. Uma lo ububanzi we ring 20 mm, bese lingakanani 20.
Enye indlela ukukala usayizi iringi, uyinkimbinkimbi kakhulu, kodwa kakhulu enemininingwane, ukusebenzisa i ngentambo abavamile. Of geometry izifundo, siyazi ukuthi ukuze sithole ububanzi we umbuthano kumele ubude bayo ehlukaniswa pi. Ukuze sibone ubude emjikelezweni umunwe, ukwenza 10 rotations ngentambo nxazonke. Khona-ke ulinganise ubude ngentambo ulwahlukanise ngu 3.14 (pi), khona-ke elinye 10.
Ukuthenga imigexo phesheya, phawula umehluko phakathi esikalini emazweni ahlukahlukene. Ubukhulu esiyingini eYurophu zivumelana ubude selilonke kwangaphakathi esiyingini. Ukuze ubone ukuthi ubukhulu ajwayelekile kithi eRussia, udinga i ring usayizi American iphindwe 0.83 bese wengeza ukuze uthole ukubaluleka 11,50. Japanese usayizi ofanayo kufanele ihlukaniswe nge 3 bese wengeza 12,67.
Ukuze kahle ukukala usayizi iringi, cabangela izimo ezilandelayo:
1. nesilinganiso senziwa ukunemba ephakeme lapho kulinganiswa Usayizi indandatho ukushisa noma amakhaza okukhulu. Kushisa, ubukhulu kuyoba ungokoqobo kakhulu kangakanani, ikakhulukazi uma umuntu othambekele edema. Izilinganiso futhi kwamazinga okushisa aphansi kakhulu kuzoholela yokuthi iringi kuyinto ezingeni lokushisa ukhululekile, wena nje bengakwamukeli.
2. Uma ujabule kakhulu, futhi ngemva kokuzivivinya okukhulu akudingekile ukukala, kusukela ketshezi zanqwabelana emzimbeni kudala iphutha okwedlulele.
3. idatha okuningi olunembile ingatholakala yokulinganisa ubukhulu indandatho ntambama.
4. Khumbula ukuthi lokho oyikho mayelana ukuthenga indandatho. Uma ububanzi kuka 8 mm, ubukhulu indandatho luyanda okungenani ingxenye yesine.
5. Lapho uthenga indandatho kancane ngaphezulu usayizi wesithombe sakho, wena uyobe uhlinzeke margin amancane, ngakho lapho kushisa ngeke zilinganiswa nguye. Ngesikhathi esifanayo, le isitokwe akufanele ube mkhulu kakhulu, ukuze abandayo akazange alahlekelwe igugu.
6. Ngakwesokudla futhi ngesandla sokunxele usayizi umunwe zingahluka. Ngakho-ke ulinganise iminwe esandleni, lapho bayahamba ukugqoka iringi.
Nazi izindlela ezilula ukukala usayizi iringi ekhaya.
Yazi Usayizi indandatho kubalulekile uma unquma ukwenza isimanga intombi yakhe. Kungabonakali ngokwanele ukuthatha ngendandatho yakhe futhi usebenzise indlela ngenhla. Uyoba kuphela ukubonga Wamangala ukuthi ngokunembile wena ukuyichaza ke, nge lingakanani.
Kukhethwa ring usayizi - it unesibopho kakhulu, ngoba amagugu abasakwazi eqolo, bese ubuyela kubo esitolo akunakwenzeka njalo.